MIS को महत्त्व (Importance of MIS) - सरकारी जागिर
MIS को महत्त्व (Importance of MIS)
खरिदार नायब शुब्बा बैंकिंग
May 4, 2020 Sarakari JagirLeaveaComment on MIS को महत्त्व (Importance of MIS)
जब सम्म सूचनाको सही र उपयुत्त प्रयोजनको लागि ठीक समयमा प्रयोग हुदैन तबसम्म सूचनाको कुनै पनि महत्व हुदैन । सूचनाको महत्व र प्रभाव मुख्य रुपमा निर्णय प्रक्रियामा झल्कन्छ । सूचना निर्णयकर्ताको लागि निर्णयको प्रमुख आधार हो । उपयत्त सूचनाको आधारमा गरीने निर्णय ठोस र मजबुत हुन्छ भने जानकारी र सुचनाको प्रयोग बीना गरीएको निर्णय फितलो, एकपक्षीय, आधारहीन र कमजोर हुन्छ । नीति निर्माता, निर्णयकर्ता तथा व्यवस्थापकहरूले अफ्नो संस्था तथा सो सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय लिन र भविष्यको योजना बनाउन नीति नियम बनाउन सूचना तथा तथ्याङकर विश्लेषण गर्दछ ।
सूचनाले निर्णय गर्न सहयोग पुयाउदछ, निर्णयले कार्यान्वयन गराउदछ । कार्यान्वयनबाट उपलब्धी प्राप्त हुन्छ । यदी हामीले कार्यक्षमतामा भएको वृद्धि अथवा उपलब्धीको मापन गर्न सक्यौ भने सूचनाको असर प्रत्यक्षरुपमा जान्न सकिन्छ । तसर्थ MIS को मूल उद्देश्य पनि कुनै पनि संघसंस्था वा त्यहा कार्यरत व्यक्तीहरूको कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु नै हो । यही तथ्यपरक सूचनाको महत्व निर्णयको प्रकारमा निर्भर गर्दछ र यसको मापनको तुलना वस्तवीक तथ्याङ्कसगँ गरीन्छ ।
MIS को महत्वलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
> नियमीत, विवेकपूर्ण एवं प्रभावकारी निर्णय समयमा गर्न सघाउ पयाउछ ।
> निर्णयकर्तालाई आवश्यक सही सूचना समयमा सम्प्रेषण गर्दछ ।
> व्यवस्थापकीय कार्यहरू सञ्चालन गर्न सघाउ पुयाउछ ।
> विभिन्न प्रणाली एवं उप प्रणाली को प्रभावकारी सञ्चालन गर्दछ ।
> अत्याधुनिक विकास, अनुसन्धान , परिवर्तनको बोध गराउनु का साथै समायोजन पनि गराउदछ ।
> समयको सही सदुपयोगमा जोड दिन्छ ।
> पैसा, वस्तु, मानिस , औजार जस्ता परम्परागत स्रोतका साथै अन्य स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग र परिचालन गर्दछ ।
> कुनै पनि संस्थाको स्थापना र विकासमा आवश्यक कार्य गर्न सघाउ पुयाउँदछ।
तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि www.sarakarijagir.com मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि https://www.facebook.com/sarakarijagir मा click गर्नु होला धन्यबाद । कृपया यस पोस्ट लाइ share गरि हामीलाई हौसला प्रदान गर्नु होला ।
Tagged bank exam preparationlok sewa aayogloksewanepal rastra banknrbलोकसेवाको परीक्षा तयारि
तालिमका समस्या तथा चुनौतीहरू-ISSUES AND CHALLENGES OF TRAINING
बैकिड क्षेत्रमा जनसम्पर्कको भूमिका तथा महत्व
सामाजिक द्वन्द्वको प्रभाव र द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरु
October 31, 2018 July 24, 2019 Sarakari Jagir
मौद्रिक नीति भनेको के हो ? यो कसरि र केको लागि तयार गरिन्छ ?
December 9, 2018 July 24, 2019 Sarakari Jagir